हिम्मतवालीका नायक अब ‘सुपरहिरो’ बन्दै - Nepal Talk
श्रावण १८ गते, २०७८ मा प्रकाशित
अन्तरिक्ष यात्राको चाहना अलि असम्भब लाग्दैन र ?
सुपरहिरोको बारेमा बताइदिनुस न?
सुपरहिरो हाम्रो फिल्मको नाम हो । हामीले नँया फिल्म फरक विषयबस्तुमा रहेर फिल्म बनाउने भनेर सोचिरहेका छौं । फिल्मका लागि उपयुक्त खालका कलाकारहरु पनि खोजिरहेका छौं ।
‘प्रदर्शन’ गरेको थिए । त्यो कार चलाउन सिकेको मैले जिन्दगिभर गाडि चलाउनकै लागि हो त ? पटक्कै होइन । मैले त समाजमा केहि शन्देश दिन मात्र खोजेको हो । फेरी सगरमाथाको सफल आरोहण गरे । त्यो पनि हात ‘खुट्टा नभएपछि भर्याङ पनि चढ्न सँकिदैन है’ भन्ने हाम्रो समाजको सोच लाई परिवर्तन होस् भन्नका लागि हो । त्यस्तै हिम्मतवाली नाम को फिल्म खेँले । सधै हिरो बनेर पैसा कमाउन होइन् । पैसा भन्दा पनि नाम कमाउन चाही पक्कै हो । हाम्रो पुर्बेली समाजमा हिरो भन्ने बितिक्कै हात–पाखुरा ठुला–ठुला हुनु पर्ने,जिम जानु पर्ने, अनि ह्यान्डसम नै हुनु पर्ने भन्ने चिन्तन र मान्यता जो छ । त्यो चाँहि गलत हो । त्यो गलत सोच हो भनेर प्रमाणित गर्नका लागि र नेपाली चलचित्रमा अर्को इतिहाँस बनाउनका लागि मैले उक्त चलचित्रमा अभिनय गरेको थिए ।
मैले चाहे अनुसार म सफल पनि भए । नेपाली समाजले यसलाई मज्जाले स्वीकार पनि गर्नु भयो । नयाँ फिल्मका लागि अफर आएका छन् । तर ति सबै सामान्य कथाबस्तुमा आधारित हुन्छन् । । त्यो म कदापी चाहन्न् । किनकि, मैले एउटा फिल्मको नायक बनेर अभिनय गर्दा नै जनताले अन्य प्रोफेसनल नायकहरुलाई भन्दा मलाई बढि चिन्छन् होला । अनि म सामान्य फिल्म खेलेर किन सस्तो बन्नु भन्नु त?
तँपाईलाई मानवतस्करीको आरोप लागेको छ । इन्टरपोलमा समेत तँपाइले उक्त मुद्धा खेपिरहनुभएको छ भन्ने छ सुनिन्छ नि?
इन्टरपोलमा मेरो केहि समस्या छैन् । मलाई नेपालमा मात्र समस्या देखाइएको हो । सत्यतथ्यको छानबिन नभएकाले गर्दा म निर्दाेष सावित हुन नसकेको मात्रै हो । नेपालमा जसले जे गरिदिंदा पनि हुन्छ । म निर्दोष हु । जनमानसमा हल्ला आएजस्तो केहि पनि होइन् ।